We She Me: Little Tea Pots
Nyi Linn Thit - 4/1/11, 8:15 AM
သားနဲ့ သမီးက သီချင်းတွေ လိုက်ဆိုနေတာ ချစ်ဖို့ ကောင်းလိုက်တာ...၊ တနေရာမှာ သားက မလိုက်နိုင်တော့ဘဲ မောပြီး ထိုင်ချလိုက်တာလေး သဘောကျမိတယ်...။
Baby taster - 4/1/11, 8:42 AM
အို့အို သားနဲ့သမီးလေးက ချစ်စရာလေးတွေ
ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) - 4/1/11, 9:00 AM
အစအဆုံး တစ်ပြုံးပြုံးနဲ့ ကြည့်သွားတယ်..
သဘာကျတယ်.. ကလေးတွေက ချစ်စရာလေး
ဘယ်လိုလုပ်လုပ် အပြစ်မြင်ဖို့ မကောင်းတဲ့ အရွယ်လေးတွေနော်...
သစ်သစ် - 4/1/11, 9:47 AM
ညီမလေးက တော်တော်လေးကို တတ်နေပြီ အရမ်းချစ်ဖို့ကောင်းတယ်
nnm - 4/1/11, 1:08 PM
cute little smart kids...you guys are so lucky to have them.
မောင်မျိုး - 4/1/11, 1:37 PM
အဖေ နဲ့ အမေ က အဆိုကောင်းတွေ အကပါ ကောင်းကြမှာ ခလေးတွေနဲ့ အတူ ၀င်ကရမှာဗျး)
Mon Petit Avatar - 4/1/11, 9:46 PM
အရမ်းချစ်စရာကောင်းတဲ့Tea pot လေးနှစ်လုံးပါလားနော်။
Shinlay - 4/2/11, 12:21 AM
Anonymous - 4/2/11, 12:27 AM
Long time no see.Tks for sharing lovely two little tea pots.They are growing very fast.Another tks for not doing April fool:)
JuneOne - 4/2/11, 1:40 AM
rose - 4/2/11, 4:56 AM
ချစ်စရာ ကောင်းလိုက်တာ သားသားနဲ့ မီးမီးက။ အသွက်လေးတွေ။ ကြည့်ပြီး သဘောကျလို့ ပြုံးမိတယ်။ သီချင်း နောက်ခံက ကိုအန်ဒီတို့ ဇနီးမောင်နှံ ဆိုထားတာလား...း)
စန္ဒကူး - 4/4/11, 10:58 AM
အရင်နေ့ကတည်းက လာကြည့်ထားတာ.. ဖုန်းကနေမြန်မာစာရိုက်မရလို့..
သီချင်းသံက အခွေဖွင့်တာလား..ကိုအန်ဒီနဲ့မမ ဆိုထားတာလား..
ဘာဖြစ်ဖြစ် ကြည့်ရတာ အတော့်ကိုစိတ်ကြည်နူးမိတယ်..
သာယာတဲ့မိသားစုဘ၀ဆိုတာလူတိုင်းစိတ်ကူးယဉ်နေတဲ့အ၇ာမို့ ရပြီးသားသူတွေအတွက်လဲ ကိုယ်တိုင်မျှဝေ ကြည်နူးမိပါတယ်။
nu-san - 4/7/11, 11:11 AM
သမီးနဲ့ သားသားက အခုဆို ရွယ်တူလို ဖြစ်နေပြီနော်။ တကယ့်ရေနွေးအိုးလေးတွေ အတိုင်းပဲ လိုက်လုပ်နေတာ။ အရမ်း ချစ်ဖို့ကောင်းတာပဲ။
သမီးလေးဆံပင်က ငယ်ငယ်တုန်းက ပါးပါးလေးပေမယ့် အခုတော့လည်း ဖြောင့်စင်းနေတာပဲ.. ကိုထူးကတော့ ရုပ်ပြောင်လေး.. :D နှစ်ယောက်စလုံးကို ဓာတ်ပုံတွေ movie file လေးတွေပဲ ကြည့်နေရတော့လေ တစ်ခါနဲ့ တစ်ခါ ထွားလာတာ ခဏလေးလိုပဲအောက်မေ့မိတယ်..
သမီးမြတ်နိုးလေး မွေးနေ့တုန်းကလည်း သတိရမိပေမယ့် အမ သမီးလေး ဖျားနေတော့ မွေးနေ့ဆုတောင်းတောင် လာမရေးနိုင်ဘူး ဖြစ်သွားတယ်.. sorry သမီးရေ.. :))
Happy Belated Birthday Tha Mee Lay Myat Noe!
rose - 4/15/11, 6:41 PM
ကိုအန်ဒီတို့ မိသားစုလေး နှစ်သစ်မှာ ကျန်းမာ ရွှင်လန်း ချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်။ cbox မတွေ့တာနဲ့ နှစ်သစ် ဆုတောင်းလေး ရေးချင်လို့ ဒီပို့စ်လေးမှာပဲ ရေးလိုက်တယ်နော်။
Anonymous - 9/14/14, 10:46 AM
Hello, we were just wondering why there is no new post since 2011. Is everything ok with you all?
Andy Myint - 9/15/14, 10:25 AM
Thanks, we are fine. I just run out of steam blogging :)..